Ndichiri WWDC 2021, Apple yakaunza chinhu chitsva cheMac. Zvakanaka, nehunyanzvi, zvakare ndeyeiyo iyo iPad, asi ichave inogoneswa neiyo macOS Monterey software yekuvandudza. Inodaidzwa kuti Universal Kudzora, inokutendera iwe kudzora akawanda Apple zvigadzirwa, senge iMac, MacBook, uye iPad, ese ane imwecheteyo keyboard uye mbeva. Hezvino izvo zvaunoda kuti uzive.
Chii chinonzi Universal Control?
Apple iri kugadzirisa yayo Kuenderera mberi system neUniversal Control. Iyo inoita kuti iwe ushande pamwe chete mbeva uye keyboard uye famba pakati peMac uye iPad kune isina musono ruzivo, hapana setup inodikanwa. Iwe unogona kudhonza uye kudonhedza zvemukati pakati pezvigadzirwa, negonzo rako richifamba pane kwese kuratidzira senge sekusungirirwa.
Zvekudzora Zvepasi Pose zvichawanikwa riini?
Universal Control ichave ichiwanikwa kana macOS Monterey uye iPadOS 15 kuburitsa kune vatengi mumatsutso 2021. Parizvino, ekuvandudza mabetas eaya maapurojeti esoftware anowanikwa kuti aongororwe, uye mabhegi eruzhinji akagadzirirwa kusvika muzhizha rino. Nekudaro, isu tinokurudzira kuti umirire kusvikira macOS Monterey uye iPadOS 15 zvaburitswa zviri pamutemo gare gare gore rino usati washandisa Universal Kudzora pane ako ese Apple zvishandiso, kungoita shuwa kuti vakasununguka kune chero mabugs kana glitches.
Universal Control inoshanda sei?
Sezvo Universal Control isati yawanikwa zviri pamutemo (kunyangwe iwe uchikwanisa kuyiyedza muMonterey yekuvandudza beta), zvese zvinotsanangurwa pazasi zvinogona kuchinja.
Hapana setup inodikanwa
Apple yakaratidza Universal Control panguva yeWWDC 2021. Apple SVP yeSoftware Injiniya Craig Federighi airatidza mashandisiro aangaita Universal Control kuisa magumo ekupedzisa pamuenzaniso wePrereate pane yake iPad, uye wozoenda kumharidzo paMacBook yake. Zvese zvaakaita kuisa iPad yake pasi padivi peMac yake. Pasina chero kumisikidza, Federighi akabata MacBook trackpad yake ndokufambisa chitupa akananga kuIpad yake, uye ipapo iyo iPad yakangozviziva. Yakachena!
Kunyangwe Apple yakati hapana setup inoda, zvingangodaro, yako Apple zvishandiso zvinofanirwa kunyoreswa kune imwechete Apple ID uye inomhanya pane imwechete network. Tiri kufungidzira zvakare kukwanisa kudzima Universal Kudzora kuchavigwawo pasi peKuenderera Kwako Zvirongwa. Tichakuzivisa iwe apo isu tichidzidza zvimwe.
Chengetedza zvigadzirwa zvako netripad imwe chete uye keyboard
Munguva yekuratidzwa kwaFederighi, yake MacBook cursor yakasvetuka zvachose kubva palaptop yake kuenda kuchiratidzo chePadad. Iye aigona ipapo kushandisa iyo cursor kudzora piritsi.
Akafungawo kufambisa chiya chekudzosera kumashure nekushinga pakati pemidziyo miviri. Zvekare, achingoshandisa yake MacBook trackpad, akabaya uye akavhara gwaro rePrereate pane yake iPad uye akabhenekera kuti adzokere kumba kwake iPad skrini. Akatotsvaira pakati pemapeji emaapp. Federighi anogona zvakare kudzora yake iPad neye MacBook yakavakirwa-mukati keyboard. Akavhura Spotlight achibva anyora maNotes kuti avhure app riya. Akazoshandisa rairo tebhu kudzosera kuPrereate.
Pakupedzisira, Federighi akaratidza maitiro aigona kudhonza nekudonhedza mafaira pakati pemidziyo. Akatora kudhirowa muPrerere paPad yake ndokudonhedza mune yakakosha pane yake Mac.
Universal Kudzora kunoshanda nematanho anopfuura maviri
Chimwe chezvikamu zvinotonhorera nezve Universal Control ndechekuti unogona kuzvishandisa nemaMac akati wandei uye maPads - kwete maviri chete. Munguva yekuratidzwa kwaFederighi, akaratidza mashandiro anoita Universal Control paMac, MacBook, uye iPad zvese kamwechete. Achishandisa keyboard yeMacBook uye trackpad, akadzora iMac yake yaive padyo. Akashandurawo kushandisa keyboard yeMac uye mbeva. Naivo, akadhonza chinyorwa chemufananidzo muPrereate pane yake iPad kune ese matatu madhijitari kuFinal Cut pane yake iMac.
Ndeapi madhizaini eApple anopa Universal Kudzora?
Unogona kushandisa Universal Kudzora pane chero Mac inomhanya macOS Monterey uye chero iPad inomhanya iPadOS 15. Kuti uone kana zvishandiso zvako zvichikodzera, ona magwara edu.
Ko iPadOS 15 inomhanya pane yako iPad?
MacOS Monterey achamhanya pane yako Mac?
Pocket-lint ine maficha ekutenderera pa macOS Monterey uye iPad OS 15. Apple zvakare ine muchina wekuburitsa unotsanangura Universal Control pano.